သူကြီးနဲ့ရွှာသူရွာသားအားလုံးမင်္ဂလာပါ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » သူကြီးနဲ့ရွှာသူရွာသားအားလုံးမင်္ဂလာပါ
Posted by Crystalline on May 16, 2012 in Copy/Paste | 52 comments
သူကြီးနှင့်တကွ ရွာသူရွာသားများအားလုံးမင်္ဂလာအပေါင်းခညောင်းပါစေရှင်။ မီးကတော့ ရွာသူအသစ်လေး Crystalline ဖြစ်ပါတယ်။ Mandalay Gazette ကိုအားပေးနေတာ ကြာပြီ ဖြစ်ပေမယ့်အခုမှပဲ register လုပ်ဖြစ်ခဲ့တာပါ။ ကံကဆိုချင်တော့ ရွာထဲကို မှတ်ပုံတင်ပြီး ၀င်တဲ့အချိန်မှာပဲ အလွန်ဆိုးရွားတဲ့ connection နဲ့တိုးပါတယ်။ ပို့စ်တခုဖတ်ဖို့ဖွင့်တာတင် ၁၅မိနစ် နောက်ပို့စ်တခုပြောင်းဖို့ ၁၅မိနစ် ဟင်း..ဟင်း.
MG Village က ရွာမျက်နှာဖုံးများရဲ့ ရုပ်ပုံများကို အရှင်လတ်လတ်မြင်တွေ့ပြီးတဲ့နောက်မှာ တော့ ဒီရွာကြီးအကြောင်းကိုအခုထက်ပိုသိအောင် တော့ရွာထဲကိုမှတ်ပုံတင်နဲ့တကွ ၀င်ကြည့်သင့်ပြီးလို့ထင်ပြီး မှတ်ပုံတင်နဲ့တကွဝင်လာတာပါ။
ရွာထဲကိုလွန်ခဲ့တဲ့တစ်နစ်လောက်က ပထမဆုံး အလည်ရောက်စဉ်က စတွေ့တာကတော့မမဝေရဲ့ဟင်းချက်နည်း လေးနဲ့ပါ။ ကော်ပီကူးပြီး cooking recipes ဆိုပြီး သီးသန့် Folder လေးနဲ့ကိုယ်မချက်တတ်တဲ့ ဟင်းချက်နည်းလေးတွေဆိုရင် သိမ်းထားဖြစ်တယ်။ မဝေတို့၊ မနိုဗွီတို့၊ မအိတို့၊ မနွယ်ပင်တို့လို
စာဖိုမှူးကြီးတွေကြားမှာ စုန်းပြူးစားဖိုမှူးတယောက်ရဲ့ ထမင်းချက်နည်း ရေနွေးကြမ်းပြုလုပ် နည်းလေးတွေကိုလည်းစိတ်ပါဝင်စားစရာဖတ်လိုက်ရသေးတယ်။ ပျော်စရာပါပဲ။
ရွာထဲကိုဝင်ဝင်ကြည့်ပြီး post တွေ comment တွေဖတ်ပြီး ရွာသူရွာသားတွေရဲ့ နာမည်တွေကိုလည်းကိုယ့်သူငယ်ချင်း၊ မိတ်ဆွေအရင်းအခြာတွေလိုရင်းနှီးနေခဲ့တယ်။
TTNU ရေးတဲ့ idiom drills တွေကို လည်းမပျက်မကွက် ကော်ပီကူးပြီးသီးသန့် Folder လေးနဲ့သိမ်းထားဖြစ်တယ်။ ကျေးဇူးပါတီချယ်ကြီး။
ဦးပေါက်ဆိုရင်လည်း ရွာထဲက ရွာမိရွာဖကြီးတယောက်လို့စိတ်ထဲမှာစွဲနေတယ်။ လူငယ်တွေနဲ့လည်းပေါင်းလို့ရတဲ့ခေါတ်မှီတဲ့အန်ကယ်ကြီးပေါ့နော်။ သင်္ကြန်က မန်းလေးမှာ ရိုက်ထားတဲ့ snapshots တွေကိုတွေ့တော့ အော်။ စိန်ကဲကျောက်ကဲခတ်ဖို့ကပိုလွယ်တယ် လို့ထင်လိုက်မိတယ်။ စတာနော်။ စိတ်မဆိုးရဘူး လေးပေါက်။
ဆူးတို့မမတို့ မမနိုဗွီတို့ကတော့ ရွာရဲ့ အမျိုးသမီးစွမ်းဆောင်ရှင်များအဖွဲ့ဝင်တွေပေါ့
မြန်မာဆန်ပြီးအေးချမ်းတဲ့အသွင်ရှိတဲ့ မနွယ်ပင်ကတော့ ဘယ်လိုဖြစ်ပြီး အာဂလူသားနဲ့ ပတ်သက်မိပါလိမ့်ပေါ့။
အဲလိုပဲနဲနဲစွာပုံရတဲ့ မမတုံကလည်းဘယ်လိုဖြစ်ပြီး ရုပ်တည်ကြီးနဲ့ဆရာကြီးဂိုက်ဖမ်းတဲ့သူနဲ့ တွေ့လဲပေါ့
ကိုဂီ @ Castle @ Chives legal ကတော့ဗဟုသုတအရာမှာ တော်တော်လေးကိုနှံ့စပ်ပုံရ တယ်။ ဓါတ်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်စေ။ သူနှစ်သက်တဲ့အားကျတဲ့အနုပညာရှင်အကြောင်းပဲဖြစ် ဖြစ် အသေးစိတ်လေ့လာဝေငှတတ်တဲ့သူပေါ့နော်။
ဘရိတ်ကီထိုင်ငိုလောက်တဲ့ ဦးဖက်ကတ်၊ တခါတရံပေါက်ကွဲတတ်တဲ့ဦးသူရ၊ သားချောလေးရှိတဲ့ ဦးဦးရွာစားကျော်၊ သမီးချောလေးရှိတဲ့မမနိုဗွီ၊ ဓါတ်ပုံဆရာ လင်းခေး လုလင်၊ ပီတာခရော့ခ်ျအစ်ကို ရွှေတိုက်ခရော့ခ်ျနဲ့မဒမ်စိုး၊ နေပူပူမှာ ဆိုင်ပို့ပစ်သင့်တဲ့ ဖရဲ၊ ကွန်ပြူတာကျွမ်းကျင်ဆရာထက်ဝေးကလည်း ကျမအစ်ကိုနဲ့ ကွန်ပြူတာကျွမ်းကျင်ပုံချင်း တူလွန်းလို့ပါ။ ရွာသူရွာသားတွေချစ်ခင်လေးစားစံထားရတဲ့ ကိုဘုန်းကျော်၊ ကဗျာဆရာ ကြောင်ကြီးနဲ့ကြောင်မျိုးနွယ်ဝင်များ၊ မမမိုချို၊ မမသဲနုအေး၊ မနောဖြူလေး၊ မခိုင်ခိုင်၊ မရိုစ်မင်း တို့လည်းမင်္ဂလာပါနော်။ Windtalker နဲ့ ဦးဦးနေးချားလည်းမင်္ဂလာပါ။ ကိုအရင့်ရောင်ရဲ့၁ မှ ၁၁ နည်းလေးကိုလည်း စမ်းသပ်ပြီးပါပြီ။.ကျမအတွက်ကတော့တက်တက်စင်လွဲ ပေမယ့် အစ်မနှစ်ယောက်ကတော့သဘောတွေကျပြီးနည်းကိုကူးသွားလေရဲ့၊ ကိုတွတ်ပီရဲ့တပည့်ကျော်လည်းမင်္ဂလာပါနော်။
အော် မေ့လို့ပါ ညလေးရေ ၊ ကျန်ခဲ့တဲ့လူတွေကိုလည်းတောင်းပန်ပါတယ်နော်။ ရွာသူရွာသားတွေဆိုကတည်း အကုန်ပါပြီးသားပေါ့နော်။
ဒီရွာသူဖြစ်လာရင်တော့ ဗဟုသုတလဲ တိုးမှာပါ..။
မျက်မှန်ပါဝါလဲ ခြောက်လတစ်ခါလောက် တိုးမှာပါကွယ်..။
မှန်လိုက်လေ ကျန်တဲ့ဗဟုသုတတိုးတာထက် မျက်မှန်ပါဝါကတော့ပိုတိုးမယ်ထင်တယ် အခုတောင် ၁၅၀ ဖြစ်နေပြီဆိုတော့လေ ရွာထဲနေ့တိုင်းဝင်ဖြစ်ရင် ၂၀၀ အထက်မှာဖြစ်ဖို့သေချာတယ်
ဒိထက်ပိုပီးတော့ မင်္ဂလာရှိချင်ရင်တော့ ရွာသူရွာသားတွေကို လဘက်ရည်လိုက်တိုက်ပါခင်ည
အလှူတုန်းက လိုက်လာတဲ့ စာဖတ်သူ တစ်ယောက်ထင်ပါရဲ့။
စာဖတ်သူဘ၀နဲ့ အလှူကို လိုက်ခဲ့ကတည်းက ရွာအပေါ်ရှိတဲ့ သံယောဇဉ်ကို ခန့်မှန်းမိပါတယ်။
အရေးအသား သွက်လက်ထက်မြက်ပုံကတော့ ရွာသူပီသပါပေရဲ့။ ;)
Did you come along whit us on that day, Crystalline?
Welcome to the MG village..
No. of course not….sorry to make you all confused..
Thks4wlcmg
အနော်လဲ မပါဘူးဗျ။ဟင့် ဟင့်.
သတိပေးဖို့ ကျန်ခဲ့လို့ ခရစ်စတယ်ရေ။
ရွာထဲမှာ လူသားစားတဲ့ ကြောင်ကြီး ရှိတယ်။
အဲဒီ ကြောင်က အထီးဆို မစားဘူး
တရုတ် မ ကြိုက်သူ ဆိုလား
တရုတ်မ ကြိုက်သူ ဆိုလား
ဟောဒီက နှူးဘာဂိုဏ်းချုပ်လေးကို သဒိယလိုက်ပါ
တော်ကြာ ရွာသူသစ်လေး ထွက်ပြေးနေပါအုံးမယ်…
ကလောင်စွမ်း တယ်ထက်သကိုး …. အင်း ကောင်းလေစွ ကောင်းလေစွ …. စာရေးတာ ကျွန်တော့်ထက်အများကြီးသာတယ် …
မင်္ဂလာပါ ညီမလေး ခရစ္စတယ်ရေ
အရေးအသားလေး ကြည့်ရတာ ဥာဏ်ကောင်းပြီး သွက်မယ့် ပုံလေးပဲ၊ အမလည်း ရွာသူ ဖြစ်တာ သိပ်မကြာ သေးပါဘူး ။ညီမ ထက် နည်းနည်း လေးပဲ စောတယ်ဆိုတော့ ကြို ဆိုပါတယ်လို့ ပြောလို့ တော့ ရပြီပေါ့။
ညီမလေး လို့ပဲခေါ်မယ်နော် …….. ခရစ္စတယ်ဆိုတော့ ကြည်လင်အေးမြတဲ့သဘောကိုဆောင်ပါတယ် …. ညီမလေးခရစ်ကို လှိုက်လှဲစွာ ကြိုဆိုပါတယ်ကွယ် ……. ရွာသူရွာသားတွေနဲ့ပျော်ရွင်စွာ စာဖတ်ရေးသားနိုင် ပါစေ …… ညီမလေးရဲ့ပို့စ်တွေကိုလည်း မျှော်နေပါကြောင်း ……….
မင်္ဂလာပါ.. ရွာသူ အသစ်ကလေးကို ကြိုဆိုပါတယ်။
အားလုံးက အဟောင်းတွေလည်း အသစ်က စတာမို့.. ကြာရင်ဟောင်းသွားပါလိမ့်မယ်။
ခဏခဏ မကြာမကြာ ရေးရင်းနဲ့ ဟောင်းသွားပါလိမ့်မယ်။ ဟိဟိ..
ညီမက အလှူလိုက်တဲ့စာဖတ်သူမဟုတ်ပါဘူး။ ညီမအရေးအသားနည်းနည်းလိုသွားတယ်။ ရွာသူရွာသားတွေကိုအရှင်လတ်လတ်ဆိုတာက များသောအားဖြင့် အင်တာနက်မှာက တချို့siteတွေမှာဆိုရင် နာမည်တုတွေနဲ့ဆက်သွယ်နေကြတာများတယ်လေ။ မမတို့ကတော့အဲဒီလိုမဟုတ်ပဲ တကယ့်လက်တွေ့ကျတဲ့ လူတွေအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုခဲ့တာပါ။ အဲဒီရက်တွေက မျက်ရိုးတွေကိုက် ဇက်ကြောထိုးတာ မခံနိုင်လွန်းလို့ အင်တာနက် လည်းမသုံးဖြစ်ခဲ့ဘူး။ ကွန်ပြူတာကို အသုံးများသွားတဲ့အကျိုးဆက်တွေပေါ့။ မမတို့ခရီးကအပြန်ဓါတ်ပုံတွေအပြိုင်အဆိုင် တင်တော့မှပဲ ကိုယ်ရင်းနှီးနေတဲ့နာမည်တွေနဲ့ရွာသူရွာသားအချို့ကို တွဲမြင်မှတ်မိသွားတာပါ။ တချို့နာမည်တွေကိုတောင်မေ့ကျန်ခဲ့သေးတယ် Aunty Padonmar တို့ U U Dice၊ ပန်ပန်တို့ပေါ့။ နောက်ထပ် အဲဒီလိုခရီးမျိုးတွေရှိသေးရင်တော့ အဆင်ပြေမယ်ဆိုရင်လိုက်ခဲ့ချင်ပါတယ်။
ဦးကြောင်ရဲ့လက်တန်း ကွန်မင့်န် ကဗျာတွေကို တဂိုးတွေ့ရင် ငါ့အမွေဆက်ခံသူပေါ် လာပြီးဆိုပြီးကျေနပ်နေလောက်ပြီး။
ကျီးမိုက် or ကြီးမိုက်
ဲJu Ju Ma
မင်္ဂလာပါ ရွာတူအတစ်ကရေးရယ်…. ကျေးဇူးလဲတင်တယ် ခင်လဲခင်တယ်… သများကို အရပ်ရှည်တဲ့ နာမည် မှည့်ပေးလို. ခိခိခိ..
ညည်းခေါ်တဲ့ နံမည် က သများအရပ်နဲ. မတိမ်းမယိမ်းဆိုတော့.. ဟိဟိဟိ..
ကြိုဆိုပါတယ် ရွာသူ အသစ်ကလေး ခရစ်စတယ်လိုင်း ရေ…. ပို.စ်လေးတွေကိုလဲ စောင့်မျှော်အားပေးနေမယ်နော…
ပီတာခရော့စ်ထက်ရှည်တဲ့ ရွှေတိုက်စိုး ( ပီတာခရော့စ်ထက်ရှည်တာ နားရွက်ပါ)
အင်းလေ … ဒီလောက် အဆွဲခံနေရတဲ့ နားရွက်မှ မရှည်လျှင် … ဘာများရှည်ဦးတော့မလဲဟယ် … ။
ကြိုဆိုပါတယ်နော် … ။ ဂေဇက်ရွာထဲ စာရေးကောင်းသူတစ်ယောက်တိုးတော့မယ်ဆိုတော့ … ပျော်စရာပါပဲနော့ … ။
Etone ကိုလည်းကျေးဇူးပါနော်။ မမတုံရဲ့ကျေးဇူးကြောင့် နာမည်ရင်းနှီးနေတဲ့သူတွေကို ရုပ်ပုံနဲ့အတူတွဲသိသွားလို့ပါ။ နာမည်နဲ့လူနဲ့လည်းလိုက်တယ်နော်။
မင်္ဂလာပါဗျ….နှုတ်ခွန်းဆက်ပို့စ်လေးကို အားပေးရင်း..နောက်ပို့စ်တွေကိုလည်း ..မျှော်နေပါ့မယ် နော်.
အောင်မယ် အောင်မယ် လာလာသေး……….. ဟဟဟဟ
ညလေးရယ် ရွာသူသစ်တယောက်အနေနဲ့ရှောင်ရန်တွေကများလိုက်တာနော်။ မှတ်သားထားပါ့မယ်။
Crystalline ရေ တိုကြီးဖရဲရှိတယ်နော်
တိုကြီးရဲ့ အကို အံဇာတုံးလေးကိုလည်း သတိရပါနော်
အံစာတုံးကိုတော့သတိမရနဲ့နော် …. သူက မျက်နှာသိပ်များတာ .. ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ် … မျက်နှာခြောက်ဖက်တောင်ရှိတယ် ..ဟိဟိ
မျက်နှာ များတတ်ပါဘူးရို့ …
အားဂျီး ခြစ်တတ်ပါဒယ်ရို့ .. အဟီးးးးးး
ဘာလိုလိုသတိရဆိုပါလား ငါလဲညည်းကို သတိရလိုက်တာ အခုပိုက်ဆံပြတ်နေလို. ၅သိန်းလောက် ချေးနော်
တိုတို နော်.. ချစ်ဖြဲလေး နော်…
member အသစ် ဆိုပေမယ့် စာဖတ်သူအဟောင်းဆိုတော့ အလှူလိုက်တဲ့ထဲက တစ်ယောက်ဖြစ်မယ်နော်..
ရှေ့ဆုံးက ဘယ်ဘက်က တစ်ယောက်လား ညာဘက်ကတစ်ယောက်လား…
စပ်စုတာဟုတ်ဘူး နော် သိချင်လို့ဘာာာာာာ
အော် ..အဲ့ဂလို ဆိုရင် သူတို့လေးတွေ ဖျာဝယ်တော့ ကျုပ်ဝိုင်းသယ်ပေးဖူးပါရဲ့..
လောလောဆယ်မဒေါ့ ..လာထား တစ်ဆယ်
မဟုတ်ရပါဘူး ဦးအမတ်လောင်းရယ်….နောက်တခေါက်ဆိုတာရှိလာခဲ့ရင် လိုက်ဖြစ်အောင် လိုက်ဖို့အားခဲထားတယ်နော်
မဝေတို့၊ မနိုဗွီတို့၊ မအိတို့၊ မနွယ်ပင်တို့လို စာဖိုမှူးကြီးတွေကြားမှာ ….တဲ့
အန်တီမအိ ကတော့ စာအုပ်ကြည့်လိုက်၊ဆိုင်မှာစားမိတာလေးပြန်ချက်လိုက်နဲ့
စမ်းသပ်ပြီး ကြော်မယ် ချက်မယ် အဆင့်ပါ ခရစ္စတယ်လေးရေ…
Post လေးတွေ မျှော်နေမယ်နော်…
အမက စားဖိုမှူးအဆင့် မဟုတ်ရပါဘူး … ဟင်းချက်ရမှာပျင်းလွန်းလို့ အလွယ်နည်းလေးတွေလိုက်လုပ်ရင်းကနေ နည်းပညာဖလှယ်ပေးတဲ့အနေအထားလောက်ပါပဲ …
အသိပညာဖလှယ်ကြတာပေါ့ … စာများများဆက်ရေးပါလို့ တိုက်တွန်းပါတယ် …
ကျေးဇူးပါမမဝေ ၊ ရေးဖြစ်အောင်ကြိုးစားမှာပါ။ ကျမအတွက်ကတော့ ကိုယ်မလုပ်တတ်အရာ၊ ကိုယ်မသိသေးတာတွေဝေမျှပေးသူ မှန်သမျှက ကျမရဲ့ဆရာတွေပါပဲ။
ခုတော့လည်း ပျော်စရာကမ္ဘာလေးထဲကို ရဲရဲကြီး ၀င်လာနေပြီပေါ့ ဟုတ်လား။ ၀မ်းသာလှိုက်လှဲစွာနဲ့ စိတ်ရင်းခံဖြင့် ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နော်……
ကျန်းခန့်သာလို့ မာပါစ ခင်ဗျာ ..
ကျနော်ကလည်း မာကလာပင်ပါလို့ ..
ဝဲလည်း ဝဲလ်ကမ်းပါလို့ …
စာတွေလည်း ထပ်ရေးပါ၊ အားပေးပါမယ်လို့ ..
ခရစ်စတယ် မကြည်စင် လေးရေ
အရီး ကလဲ မင်္ဂလာပါလို့ နှုတ်ဆက်ပါတယ်နော်။
ဒီလို သွက်လက်တဲ့ ရွာသူလေးတွေ ကြောင့် ရွာကြီး ပိုစည်ပင် လာမှာ မြင်ယောင်မိပါရဲ့။
သမီးတင်လာနဲ့ နောက် လေးတွေကို မျှော်နေမယ်။
သမီးတင်လာနဲ့ နောက် Post လေးတွေကို မျှော်နေမယ်။
ကြိုဆိုတဲ့အတွက် အရမ်းဝမ်းသာကျေးဇူးတင်ပါတယ် အရီးလတ်
သမီးကတော့ ရေးတာနဲ့ဖတ်တာဆိုရင် အမှန်အတိုင်းပြောရရင်
စာဖတ်တာပိုပြီးဝါသနာပါတယ်။ MG ကို ၀င်လေ့လာရင်းနဲ့မှ စာရေးချင်တဲ့
စိတ်ဖြစ်လာတာပါ။ MG ကမွေးလိုက်တဲ့ပိုးပေါ့နော်။ တရားခံရှာတာလေ….
ကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင် တော့ မဟုတ်ရပါဘူးကွယ်
ဦးက စားတာရယ် အိပ်တာရယ် ပဲကျွမ်းပါတယ် လူပျင်းကြီးပါကွယ်။
ဦး တွေးရင်း ၀မ်းနည်းမိတာက အသက်လည်းကြီးပါပြီကွယ် ဦးမှာ အခုထိ ဘာဆိုဘာမှ
ရွာ အလှူမှာ ပါတယ်ဆိုတော့ ဘယ်သူများလည်း လို့ သိချင်မိပါတယ်ဦးကိုတော့ သိမလားပဲ
အသားဖြူဖြူ နဲ့ မင်း သားချော ချောတဲ့ လူတစ်ယောက်ကိုတွေ့မိမှာပေါ့
အဲ့ဒါ ဦး မဟုတ်ပါဘူး မောင်ဂီပါကွယ်။
ဆရာထက် ( ဗိန္ဓော ဆရာကြီး)
မီးရယ်… မီးလို့ စရေးတဲ့ စာလေးကို ဖတ်လိုက်ရထဲက ကိုရင့် ရင်မှာ ဖျတ်ဖျတ်ကို လူးသွားခဲ့ပါတယ်..
မီးခဏခဏပျက်လို့ စိတ်နွမ်းရတယ်… မီးခဏခဏလာလို့ ပျော်ရွှင်ရတယ်…။ ဒီက မီးလေးကကော
အစ်ကိုတို့ နှူးဘားဂိုဏ်သားတွေကို အဲ့လိုမျိုး လုပ်မှာရားဟင်..။ အကိုတို့ နှူးဘားဂိုဏ်သားတွေက
အရက်သောက်တတ်ပြီး လိမ်တတ်တာလေးက လွဲရင် ကြောင်ဂိုဏ်းထက် ဘယ်ဘက်ကစမ်းစမ်း
ညာဘက်ကစမ်းစမ်း သိပ်ခံစားရလွယ်တတ်လို့ပါ…။ အပေါ်က သမားတော်ကြီး ကိုထက်ဝေက ကွန်ပျူတာကော
အင်တာနက်ကော ကြင်ရာဖက်ကိစ္စမှာ သိပ်ကျွမ်းဒါ…
အကို့နာမည်လေး မပါတာကလွဲရင် မီးလေး ခရစ်စတယ်လိုင်း ပို့စ်လေးဟာ Postiveဆောင်တဲ့
ပို့စ်လို့ ခံစားမိပါတယ်… စိုးတယ်… စိုးမိတယ်.. စိုးရိမ်မိတယ်…
အော်… နေ့ လည်က တစ်ရေးအိပ်ဖြစ်တုန်း အိပ်မက်ထဲမှာ..
ချစ်စရာညီမငယ်လေးတစ်ယောက်နဲ့ မိတ်ဆက်ရမယ်လို့ မက်ခဲ့တာ မှန်နေပါကလား
ကိုပေကတော့ ခင်ပြီးရင်ခင်တတ်သူပါကွယ် ။
မင်ဂလ မင်ဂလာပါ ကွယ် ။
မင်္ဂလာပါ ခရစ်စတယ်ရေ တို့ရွာထဲ
ရွာထဲတော. လူအတော်စုံသွားပြီ …
အားရစရာပါ ….ဂုဏ်လဲယူပါတယ် ။
မင်္ဂလာဆောင်ရင်ဖိတ် ……အဲမှားလို. ..
မင်္ဂလာပါ ဗျာ ………….။
စာဖတ်သူမှ စာရေးသူ၊စာရေးသူမှ အသိပညာပေးသူဖြစ်ပါစေ။
Ma Ma Padonmar ညီမ ကြိုးစားပါ့မယ်
“surmi” သူကြီးနာမည်ကိုမေးသလိုမေးမိနေမှာစိုးလို့ “ဆာမိ” လား ဒါမှမဟုတ် ????
ဦးဦးထက်ဝေး၊ ကိုရင်စည်သူ၊ ကိုရင်မောင်၊ windtalker
ကြိုဆိုပါတယ် crystalline ရေ။ သူကြီးကတော့ ၁၀ပွိုင့် နှမြောလို့မကြိုဆိုတော့ဘူးတဲ့။